Fomba fahitana setroka miaraka amin'ny Photoshop haingana | Famoronana an-tserasera
Typography setroka vokatry miaraka Photoshop hahazo izy ireo a vokany manintona azonao ampiharina amin'ireo lahatsoratra mila an'ity fomba manokana ity. Amin'ny tetikasa sary sasany dia mila mampihatra hafa isika vokatry ny typografika mba hanatsarana kokoa ny hafatra hita, izany no antony matanjaka ny borosy mpiara-miasa amin'ny mpamorona rehetra. Hianaranao ny mampiasa borosy amin'ny fomba azo ampiharina mba hahatratrarana a fampifangaroana realista eo amin'ny effet sy typography.
borosy Photoshop toy ny a ny resaka majika izay manampy antsika hiasa haingana kokoa rehefa mikasa ny hanao effets sasany isika, tena misy ny zava-misy raha toa ka haintsika tsara ny mifehy azy ireo hahatratra ny zava-misy lehibe kokoa. Amin'ity tranga ity dia hianarantsika ny miasa miaraka amin'ny borosy amin'ny setroka mifoka sigara mba hampiharana azy amin'ny typeface mba hahatratrarana vokatra iray typografika namboarina.
Mba hahatratrarana izany vokatra izany, ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny manana borosy mamorona ny setroka, vitantsika izany to download de Internet for free.
Ny fomba mety hampiasana ny vokany tena hiasa fomba fifandraisana dia ny mampihatra azy amin'ny famolavolana izay ilana izany vokatra manokana izany, fahadisoana be dia be matetika ny fametahana ny vokany amin'ireo endritsoratra tsy misy antony tsy misy lozika.
1 Ampidino borosy vokam-setroka
2 Manorata lahatsoratra
3 Ampiasao ny borosy vokatry ny setroka
3.1 Paramera borosy
3.2 Ovao ny endritsoratra
Ampidino borosy vokam-setroka
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia to download ny borosy vokatry ny setroka, noho izany dia miditra amin'ny tranonkala isika ary tsindrio ny Download, hisintona ho azy rakitra iray voafintina izay tsy maintsy esorintsika izy ireo ary hosokafantsika hahafahantsika mampiasa azy Photoshop, aorian'ity dingana ity dia efa tokony ho ao amintsika ny borosy katalaogin'ny borosy.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manoratra lahatsoratra izay tianay hampiharana ny vokatray, amin'ity tranga ity dia nosoratanay ny teny Burger hampifandraisina kely amin'ny lohahevitry ny sakafo. Maimaimpoana ny endritsoratra ampiasaintsika, azontsika ampiasaina misy typeface rehetra izay mahaliana antsika.
Raha hanoratra lahatsoratra, ny sisa ataontsika dia ny mifantina ny Fitaovana an-tsoratra eo amin'ny sisin'ny fitaovana Photoshop. Izahay dia mitady endritsoratra mahaliana antsika ary manoratra ny lahatsoratra izahay miaraka aminy.
Ampiasao ny borosy vokatry ny setroka
Manokatra ny fitaovana borosy izahay ary mitady ny borosinay vokatry ny setroka. Amin'ity dingana ity dia mila mijery andiam-pitsipika fototra ao amin'ilay fitaovana borosy isika hahafahana mifehy tsara azy.
Ireo dia safidy fototra fa tsy maintsy fehezintsika mba hahazoana antoka fa hahatratra ny vokatra tadiavintsika ny vokatsika. Voalohany indrindra ny haben'ny borosy Hanampy antsika amin'ny famoronana ny vokatsika hanitsiana azy io. ny opacity sy mikoriana Mamela antsika hanitsy ny ambaratongam-pahitana ny vokany izy mba hampamirapiratra bebe kokoa na tsia. ny loko mamela antsika hanova ny feon'ny setroka izay afaka miovaova arakaraka izay tadiavintsika.
Rehefa mazava ny momba ny fomba hifehezana kely ny borosy dia manomboka ny zavatra manaraka tokony hataontsika apetaho amin'ny lahatsoratra mamorona a sosona poakaty vaovao ary apetraho eo ambonin'ilay sosona lahatsoratra tany am-boalohany, maimaim-poana tanteraka ity dingana ity satria hitady ny vokany manokana isika tsirairay. Ny tsara indrindra dia ny hahazoana valiny izay miasa dia mitady referansa en Internet hahita bebe kokoa na latsaka hoe inona ny tena setroka.
Raha te hampifanaraka tsara kokoa ny borosy isika dia afaka manao izany ovao ny orient-nao Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny safidy hitantsika voamarika eo amin'ny sary ambony, ity safidy ity dia mahafinaritra mba hanomezana ny dynamism vokany satria mamela antsika ovao ny fitongilanao.
Ovao ny endritsoratra
Ny zavatra manaraka azontsika atao mba hananana ny vokany hanana fifandraisana azo antoka sy mangatsiaka kokoa dia ny famafana kely ny typography alao tahaka ny setroka izany fangaro izany, ity dia zavatra iray ihany no hataontsika raha mitady izany vokatra manokana izany isika. Ny zavatra voalohany hataontsika dia rasterize ny sosona original type typographic amin'ny alàlan'ny fanindriana azy amin'ny bokotra ankavanan'ny totozy sy ny fisafidianana ny safidy rasterize layer.
Ny zavatra manaraka hataontsika dia mamorona saron-tava ao amin'ny sosona lahatsoratra misy antsika ary miaraka amin'ny fanampian'ny borosy manova ny masontsivana mba hahatonga azy io ho malama be dia manomboka mamafa faritra typography.
tsikelikely mamafa izahay ampahany amin'ny typografia mandra-pahatongantsika ny vokatra tadiavintsika. Raha maniry isika dia afaka mamorona sarontava ho an'ny setroka ary mamafa ny faritra misy azy malama endrika manahafana ny tena zava-misy.
Tao anatin'ny minitra vitsy monja dia nahavita a vokatra mahaliana ho an'ny typografika, Amin'ity ohatra ity dia tena mahavariana ny vokany saingy azo malemy sy azo ovaina amin'izay ilaintsika izy. borosy Photoshop Manolotra anay izy ireo posibilidad maro rehefa mamolavola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Tipografia vokan'ny setroka miaraka amin'ny Photoshop
16 ny sarin'ny CSS manonitra ny tranokalanao